Ukufudumala kwembulunga yonke kuthanda omiyane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kuthanda omiyane
I-Los ama-mosquito Zingezinye zezinambuzane ezicasulayo kakhulu laphaya, futhi zingenye yezingozi kakhulu. Kunezinhlobo ezibalelwa ku-3200 200, ezingama-200 zazo ezondla ngegazi lezinye izilwane, kanti kulezi ezingama-XNUMX kunezinhlobo ezimbalwa, njenge Aedes albopictus (Umiyane we-tiger wase-Asia) noma i- Anopheles gambiae, ezithwala izifo ezibulalayo.
Njengoba amazinga okushisa omhlaba ekhuphuka lezi zinambuzane Benza amakoloni ezifunda, kuze kube manje, ebezibanda kakhulu kubo.
Omiyane badinga kuphela amanzi, ukushisa kanye nezinto zokuhamba ukuze basakaze. Ngokuhamba kwamazwe omhlaba, ukufudumala kwembulunga yonke kanye nezindlela zokuhambela ezithuthukayo, bakuthola kulula kakhulu; ngokweqile ngisho. Udenga ne-yellow fever isifo sithathe amakhulu amathathu eminyaka edlule ukusabalala emhlabeni wonke, kodwa I-Chinkungunya, igciwane le-West Nile ne-Zika abaneminyaka engama-16, UBill Gates uyachaza kwi-documentary ethi “Mosquito» eyethulwe yiDiscovery Channel namuhla, ngoLwesine ngoJulayi 6, 2017 ngo-22.00 ebusuku.
Okwamanje, kunabantu ababalelwa ezigidigidini ezi-2500 abahlala ekuchayekeni kokuqubuka okungenzeka kube yiZika, igciwane elatholakala ehlathini lase-Uganda ngo-1947. Naphezu kwesikhathi esidlulile, kuyinkinga enkulu emazweni anjengeBrazil, iPuerto Rico noma i-United States.
Kuze kube manje, amaqanda nezibungu zafa phakathi nobusika ngokubandiswa, ikakhulukazi emazweni asenyakatho nenkabazwe; Noma kunjalo, ukukhuphuka kwamazinga okushisa kubavumela ukuba basinde ezinyangeni ezibandayo, ngakho zanda ngokushesha okukhulu.
Impi ibukeka isesekude ukuphela. Ngenxa yokwanda kokumelana nomiyane ezibulala-zinambuzane, ezinye izinkampani ezinjenge-Oxitec seziqalile ukugoma abesilisa nge "killer gene" edala ukufa kwenzalo ngemuva kokubambisana nabesifazane, okuyibo abangasabalalisa izifo. Isikhulu senkampani, uHadyn Parry, uthi isibalo sabantu base Aedes aegypti ukuthi basebenzise ekulingweni kwehle ngo-82%, okuyinto ethakazelisa impela.
Siyethemba ukuthi kungakapheli iminyaka embalwa singaba nomkhiqizo osebenza ngempela ukuwulawula.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukufudumala kwembulunga yonke kuthanda omiyane
Kungani izihlahla zingakhuli kusuka kumamitha athile ukuphakama?
Ukwanda kwama-0,5ºC kuphela kwanele ukuqinisa izimo zezulu